थारू ग्रामथानमा यसरी चल्यो डोजर [भिडियाे] – Tharuwan.com
थारू ग्रामथानमा यसरी चल्यो डोजर [भिडियाे]
June 3, 2018 June 7, 2018 admin
इटहरी ८ टेंग्राटोलका थारुहरुले वर्षौदेखि पूजापाठ गर्दै आएको ग्रामथानमा भूमाफियाहरुले डोजर चलाएका छन्। भूमाफियाले पुलिस प्रशासनकै संरक्षणमा नगरपालिकाको डोजरले त्यहाँ रहेको ग्रामथानलगायत भूमिघर भक्तकाएका हुन्। उनीहरूले थारु महिला अगुवाहरुमाथि कुटपिटसमेत गरेका छन्।
ग्रामथान र भूमिघरलाई भत्काउने क्रममा ग्रामथान संरक्षण समितिकी अध्यक्ष जानकी चौधरीलार्ई कुटपिट गरेको स्थानीय तथा समितिका सचिव सुमित्र चौधरीले बताएकी छन्। ‘त्यो थरुनी कहाँ छ, त्यसलाई कुट’ भन्दै कुटपिट गरेकाे उनले बताइन्। घाइते चौधरीलाई बिराटनगरको अस्पतालमा भर्ना गरिएको छ।
ग्रामथान संरक्षणका लागि चौधरीले सबैसँग अपिल गरेकी छन्। राज्यले थारुको पहिचान समाप्त पार्न लागिपरेको स्थानीयहरुले बताएका छन्। त्यहाँ एलानि जगगामा भूमिघर, ग्रामथान, जितिया पानी घट्ट पोखरी रहेको थियो ।
35छुटाउनु भयो कि देश
विजय गच्छदार, गोपाल दहित र लक्ष्मण थारुले दिएजस्तो धोका अब नहोस् !
सबै किसानको कार चढ्ने हैसियत बन्छ : राज्यमन्त्री चौधरी
खिचरा महोत्सवको समापन, थारु संग्राहलय बनाउन प्रदेश सरकारले सहयोग गर्छ : मुख्यमन्त्री
थारु आयोगमा बर्दियाका बिष्णुप्रसाद चौधरी सिफारिस
खिचरा महोत्सवमा कृषकहरु पुरस्कृत
खिचरा महोत्सवमा जलेश्वर चौधरीलाई सहयोग संकलन
चितवनमा बिपिनले भेटे साँच्चिकैका ‘गोपी’
श्रीमतीको हत्या गरी प्रेमलाल चौधरीले गरे आत्महत्या
खिचरा महोत्सव : स्वुप्न सुमनले फ्यानहरुलाई रुवाए
खिचरा महोत्सव : भेट्रान दौडमा हरिप्रसाद शर्मा प्रथम
रंग बिरङ रहर गीत सार्वजनिक
खिचरा महोत्सवमा जब दिपक बज्राचार्यले भने ‘ओ अमिरा’
Lekhee - वीरगञ्जका थारु समुदायले मनाए माघी, १६ विगाहा जग्गा दान गर्ने चौधरी सम्मानित
School dan/ke sangai tharu lai agadi badhaun khoe dan?
devendra chaudhary - बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जले हडपेको थारुको जग्गा फिर्ता गर्न माग
jay tharu uchhit maag lai bewasta gare aandolan sasakata garnu parx jay tharu
Bishnu tharu - संसदमा थारु कोटाको माग, तेजुलालले सोधे- नेपालमा कतिवटा संविधान छ?